Brickaville : mandroso ny asa fanarenana ny Sirama (NewsMada) | AEMW
Brickaville : mandroso ny asa fanarenana ny Sirama (NewsMada)
Mandroso ny asa fanarenana ny Sirama any Brickaville amin’izao fotoana izao. Sirama izay lasa Société Sucrière et Agricole de Madagascar (SASM), vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny Sirama sy ny orinasa Vidzar. Amin’izao asa fanarenana ny orinasa mpamokatra siramamy izao, velaran-tany 250 ha no efa voavoly fary ankehitriny ary aoriana kely hampiana 400 ha izany fambolena izany. 60 t isaky ny hekitara ny vokatra andrasana.
Manomboka hita taratra any amin’ny fiainan’ny mponina ny lafiny tsara ara-toekarena hatramin’ny nanombohana ny tetikasa ao an-tanànan’i Maromamy, toerana misy ny orinasa. Mpiasan’ny SASM ankehitriny olona 314 avy ao amin’io tanàna io sy ny manodidina. Nandritra ny fandalovan’ny minisitry ny Indostria, Chabani Nourdine, tany an-toerana, nisy ny fihaonana tamin’ireo mpiasa, nandraisana ny hetahetan’izy ireo, indrindra amin’izao ankatoky ny fidiran’ny mpianatra izao. Jerena ihany koa ny vahaolana momba ireo olona mipetraka tsy ara-drariny amin’ny tranon’ny Sirama ao Maromamy.
Nampahalalana ny minisitera ny fandaharam-potoana fanombohan’ny asa ao Brickaville ny taona 2017, efa-bolana aorian’ny any Nosy Be. Fitantanana tsy miankina amin’ny fanjakana izao ny hitondrana ny SASM, ka ho hoentitra amin’ny lafin-javatra maro ary heverina fa ho tonga any amin’ny fanarenana marina. Misy lafin-javatra maro hafa anefa, tsy maintsy miankina amin’ny fanjakana ihany, raha ao an-tanàna sy ny manodidina, toy ny famokarana angovo, lalana famoaham-bokatra, fiantohana ny fandriampahamelana.
Ilàna fanarenana avy amin’ny fanjakana toy izany koa ny raharaham-panjakana maro ao anatin’ny distrikan’i Brickaville. Misy ifandraisana betsaka amin’ny asan’ny orinasa daholo izany.
← Antanandava Toamasina : hita tao anaty kirihitr’ala ny fatin’ilay mpitondra bajaj (NewsMada)
Faritra Menabe : tsenabe hiantsoana ny rehetra (NewsMada) →